-एनआरएनए एनसीसी डेनमार्कको अधिवेशन नजिकिदै, छैन उत्साह र रौनकता
कोपनहेगन, इनेपालखबर, २४ जुलाई २०२१
गैरआवाशीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) डेनमार्कको अधिवेशन नजिकिदै गएको छ तर यसपाली अधिवेशनप्रति उत्सुकता र रौनकता शुन्य छ।
विगतका अधिवेशनहरुमा महिना दिनअघिबाटै ब्यापक प्रचार-प्रसार, उम्मेदवारी घोषणा, छलफलहरु बाक्लै हुने गर्थे माहोल नै फरक हुन्थ्यो तर यसपाली धेरैको चासो र चिन्ता कम देखिन्छ।
एनआरएनए परदेशमा रहेका नेपालीको साझा र सशक्त संस्था मानिन्छ। यो संस्थाबारेमा विभिन्न आलोचना पनि हुने गरेछ । यसको नेतृत्वमा पुग्न धेरै आकांक्षी हुने गरेको नज़ीर छन् । तर, किन होला ! यसपाली डेनमार्कको नेपाली समुदाय चुपचाप र शान्त छ ।
कोरोना महामारी, यसपाली पन्जिकृत सदस्य संख्या आधा भन्दा बढ़ी घट्नु, एनआरएनए डेनमार्कको वर्तमान कार्यसमिति विभिन्न काण्ड र आन्तरिक कलहमा फंसेर संस्थाको गरिमा र साख ह्वात्तै घटाउनु लगायतका कारण एनआरएनएपप्रति ध्यान कम भएको धेरैको बुझाई छ।
यो कमिटीले डे वानबाट काम गर्न सकेन कमिटी पुरै असफल भयो। विभिन्न बिबादमा मुछियो। साथीहरुले एनआरएनए संस्थालाई खत्तमै बनाए अनि को सदस्य बनोस तनी । सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार शशि ढकालले भने ।
एनआरएनए ग्लोबल समितिको केहि महिना अघि भएको विधान अधिवेशनले संसारभरका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रीय समन्वय परिषदको अधिवेशन जुलाई महिनाभरि गर्ने भन्ने निर्णय गरेकाले डेनमार्कको पनि जुलाई महिनाभर गर्नै पर्ने बाध्यता छ। तर, पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी र कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन ।
एनआरएनए डेनमार्कको अधिवेशन अनुगमनको लागि केन्द्रीय प्रतिनिधीको रुपमा पूर्व अध्यक्ष यमलाल सुवेदी चयन भएका छन्। ३१ जुलाई भित्र निर्वाचन नगरे संस्थालाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्छ । अग्रजहरुको मेहनतले खड़ा भएको एनआरएनए डेनमार्कमाथी नै धब्बा लाग्न सक्छ। अब सबैसंग सल्लाह गरेर मिलाएर सफल बनाउनै पर्छ। केन्द्रीय प्रतिनिधी सुवेदीले भने ।
एनआरएनए डेनमार्कमा अघिल्लो पटक १०६४ जना पन्जिकृत सदस्य थिए । यसपाली जम्मा ४७७ जना मात्रै सदस्य बनेको बताइएको छ। यसपालि आधा भन्दा बढ़ी किन घटे त ? एनआरएनए एनसीसी डेनमार्कका पुर्व महासचिव सुमन थापाले भने, कारण कोरोना पनि होला र यो कार्यसमितिमा बढी विबाद भयो, गलत कुरा बढ़ी बाहिर आए संस्थाप्रति आकर्षण भएन त्यसैले घटे ।
एनआरएनए एनसीसी डेनमार्कको फेसबुक पेजमा जुलाई ३१ तारिखमा अधिवेशन गर्ने भन्ने मात्रै छ। तर, विस्तृत जानकारी केहि छैन। जसले गर्दा धेरैमा अन्योलता छाएको छ। यसबारेमा १ साता बाँकी छंदा अहिलेसम्म आफ्ना पन्जिकृत सदस्यलाई सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक ठानिएको छैन ।
अधिवेशनको लागि ३ महिनाअघि नै निर्वाचन समिति बनाउनु पर्ने विधानको १४ नम्वर बुंदामा छ । यसलाई पुरै लत्याइएको छ, बिधान मिच्नु भनेको सामाजिक अपराध नै हो। यो समिति पुरै असफल भयो। ३ महिना अघि बन्नुपर्ने निर्वाचन समिति अझै किन नबनाएको ? ढकालले प्रश्न गरे ।
एनआरएनए डेनमार्कले अहिलेसम्म यो सम्बन्धमा प्रष्ट समेत पारेको छैन । अधिवेशनको मिति आउन साता दिन पनि बाँकी छैन । कसरि नयाँ कार्यसमिति चुन्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना अझै छैन । सर्वसम्मत, अनलाइन वा भौतिक रुपमा मतदान गर्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।
२ दिनअघि विधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नको लागि भनेर सुर्यप्रकाश खनालको नेतृत्वमा विधान संशोधन उपसमिति गठन गरिएको सूचना फेसबुकमा आएको छ। सदस्यहरुमा अन्जु पराजुली, शशि श्रेष्ठ, शिव कार्की, राजमान तामांग, सरस्वती कार्की र हरि न्यौपाने रहेको सूचना बाहेक अधिवेशन सम्बन्धि कुनै जानकारी छैन ।
निर्वाचन आयुक्त मिश्रले १० दिनमा छाडे, फेरी पौडेल आए
केहि दिनअघि पुर्व अध्यक्ष मोहन मिश्रलाई निर्वाचन गराउन आयुक्त तोकिएको हल्ला बजारमा चल्यो । तर, आधिकारिक सूचना कतै छैन जानकारी कसैलाई भएन ।
१३ जुलाईको बैठकले मिश्रलाई तोकिए पनि १० दिनपछि उनले छाडेपछि कृष्ण पौडेललाई शुक्रवार साँझ संयोजक चयन गरिएको सूचना आएको छ । घरायसी कारणले गर्दा मिश्रले छाडेको बताइएको छ ।
१३ जुलाईको बैठकले पूर्व अध्यक्ष मिश्रलाई आयुक्त तोकिएको हो तर, किन छाड्नु भयो केहि जानकारी छैन ।कार्यसमितिका एक जनाले भने ।
पौडेल संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरुमा प्रकाश ढकाल, दिपक तिवारी, लिलनाथ गौतम (गौतम यात्री), घनश्याम गौतम, नवराज सिटौला र मेनिता तामांग चयन भएका छन् । पौडेल नेपाली समाज डेनमार्कका परिचित अगुवा हुन् । शालिन र बौद्धिक उनी एनआरएनए डेनमार्कका पूर्व महासचिव र प्रवासी नेपाली मन्च डेनमार्कका पूर्व अध्यक्ष भैसकेका छन् ।
लेख/पढमा रुची राख्ने पौडेल सांगठनिक र सामाजिक एकतामा जोड़ दिने ब्यक्तिमा गनिन्छन्। लथालिङ्ग जस्तै बनेको एनआरएनए डेनमार्कको अधिवेशन सफल रुपमा सम्पन्न गराउने ज़िम्मेवारी पौडेललाई आएको छ। नेपाली समुदायसंग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्ने हो, सबैको साथ र सहयोगमा सफल बनाउन पहल गर्नेछु।
पूर्व अध्यक्षका रेकर्ड राम्रा, अहिले खड्काको पालामा सदस्य आधाभन्दा बढ़ी घटे
डेनमार्कमा एनआरएनए सन् २००९ मा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै साझा संस्थाको रुपमा सबै जोड़िदै आएका छन्। टीममा बसेर काम गरे पनि नेतृत्वमा जो रहन्छ राम्रो काम गरे पनि नराम्रो गरेपनि जस/अपजस उसैलाई जान्छ । पूर्व कार्यसमिति र नेतृत्वले के के गरे त ! जसबारे छोंटो चर्चा गरिएको छ ।
एनआरएनए डेनमार्कमा संस्थापक अध्यक्ष सोम सापकोटा भए। पहिलो अधिवेशनबाट पनि उनी फेरी अध्यक्ष बने । उनले डेनमार्कमा एनआरएनएलाई स्थापना गर्न भूमिका खेले । सबै जोडिदै गए । जसका कारण सापकोटालाई सम्झने गरिन्छ ।
त्यसपछि मोहन मिश्र अध्यक्ष बनेपछि २ राम्रा काम भए । नेपालीलाई क़ानूनी परामर्श गराउन भनेर डेनिस अधिवक्ताको व्यवस्था त्यतिबेलाबाट शुरु गरिएको थियो । प्रभावकारी जुन कार्य अझै पनि जारी छ । मिश्रले सबै नेपाली संघस्थालाई समेटेर दशैंको अवसरमा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्न शुरु गरेका थिए । कोरोनाअघि अरु समितिले पनि निरन्तरता दिए ।
मिश्रपछि अध्यक्ष बनेका दीपक सापकोटाको कार्यकाल पनि सम्झना लायक छ। नेपालीलाई भैपरि आउने अप्ठ्यारामा सहयोग गर्नको लागि भनेर सामाजिक कोष सापकोटाले खड़ा गरेका थिए । एनआरएनएको कार्यसमितिमा जाने सबैले कोषमा निश्चित रक़म राख्नु पर्ने हुन्छ। कोषमा अहिलेसम्म झण्डै १ लाख डेनिस क्रोनर ज़म्मा भएको बताइन्छ।
उनकै पालामा एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले र संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सहभागीतामा स्क्यान्डिभियन क्षेत्रका देशहरु डेनमार्क, नर्बे, स्विडेन र फिनल्याण्डका एनआरएनएको भेला कोपनहेगनबाट शुरु भएको थियो। यो भेला गत वर्ष नर्बेमा भएको थियो।
त्यसपछि अध्यक्ष भएका दीपेन्द्र चुडालको कार्यकालमा एनआरएनए युरोपियन रिजनको बैठक डेनमार्कमा भएको थियो । २ दिनसम्म चलेको बैठक सफल रह्यो ।
चुडालपछि अध्यक्ष बनेका यमलाल सुवेदीको पालामा सबैभन्दा धेरै पंजिकृत सदस्य बनेका थिए । उनको कार्यकालमा अहिलेसम्मकै धेरै १०६४ जना सदस्य बनेका थिए । संस्थालाई बैधानिक र आर्थिक रुपमा चुस्त तथा पारदर्शी बनाउन सुवेदी नेतृत्वको टीमले भूमिका खेलेको भनेर धेरैले प्रसंशा गर्ने गर्छन् ।
उनीपछि निर्वाचित भएका वर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र खड्काको कार्यकाल धेरै विबादपूर्ण रहेको डेनमार्कबासी नेपालीको बुझाई छ। कार्यसमितिमा चरम आन्तरिक कलहका कारण सहि गति लिन नसकेको कार्यसमितिका धेरै स्विकार्छन् ।
एनआरएनए डेनमार्कमा अघिल्लो पटक १०६४ जना पन्जिकृत सदस्य थिए । तर, यसपाली ह्लातै घटेर ४७७ मा झरेका छन् । यसको नैतिक ज़िम्मा यो कार्यसमिति र मुख्यगरी अध्यक्ष खड्काले लिनु पर्ने धेरैको भनाई छ ।
खड्काले विधी बिधान मिचेर मनपरी तरिकाले अघि बढेको कार्यसमितिका धेरैले बताउँछन । ३ महिनाअघि निर्वाचन समिति बनाउन पनि उनी बाधक भएको आरोप कार्यसमितिका एक जनाले लगाए ।
कोरोना महामारीको समयमा भने नेपालीहरुसंग रक़म उठाएर नयाँ आएका केही विद्यार्थीलाई २ चरणमा राहत वितरण गरिएको थियो । यो मात्रै उल्लेख्य कार्य हो । जसको हिसाव महिनौंपछि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
एनआरएनए डेनमार्कको राम्रो भन्ने केहि छंदै छैन समाजमा, गतिलो केहि गरेनन् अनि को आएर सदस्य बन्छ तनि, ढकालले फेरी भने, ४ जना कार्यसमिति सदस्य र प्रवक्ता समेत मनोनयन गर्न सकेन यो टीमले, कोषाध्यक्षले राजिनामा दिएपछि चयन समेत गर्न सकेन, यसको राम्रो भन्ने केही छैन ।
डेनमार्कमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाहरुसंग समेत कुनै किसिमको सहकार्य नभएको बताइन्छ। एनआरएनएसंग मिलेर धेरै गर्न सकिन्थ्यो, अध्यक्ष खड्काले त सामाजिक व्यक्तिहरुलाई अपमान गर्दै हिडे, एक संस्थाका अगुवाले भने।
खड्का नेतृत्वको टीमले आन्तरिक कलहमै पुरै कार्यकाल सकाएको धेरैको बुझाई छ । ‘संस्था चलाउन जवाफदेहिता चाहिन्छ तब न रिज़ल्ट आउँछ, अहिलेको नेतृत्व टीममा त्यो देखिएन, पूर्व महासचिब सुमन थापाले भने ।